HomeWararka CiyaarahaDenis Zakaria oo doonaya inuu Liverpool u dhaqaaqdo sanadka soo socda
December 2, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Warka Xiisaha Leh 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Monchengladbach Denis Zakaria ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday inuu u dhaqaaqo Liverpool .
25-sano jirkaan ayaa mar kale u ahaa ciyaaryahan muhiim u ah kooxdiisa Jarmalka xilli ciyaareedkan, isagoo u saftay 12 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay labo gool iyo hal caawin.
Heshiska Zakaria ee haatan waxa uu dhacayaa bisha June ee soo socota, si kastaba ha ahaatee, xiddiga heerka caalami ee dalka Switzerland ayaa la rumeysan yahay inuu doonayo inuu raadiyo koox cusub marka uu qandaraaskiisu dhamaado.
Kooxo dhowr ah, oo ay ku jiraan Manchester United , Real Madrid , Juventus iyo Bayern Munich , ayaa loo aqoonsaday inay xiiseynayaan ciyaaryahanka khadka dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay El Nacional , Zakaria ayaa doonaya inuu ku biiro Liverpool si uu ugu biiro koox kale, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe uu go’aansaday inuu u wareego Anfield 2022.
Agaasimaha Monchengladbach Max Eberl ayaa dhawaan sheegay in kooxda Jarmalka ay u furan tahay inay u ogolaato Swiss-ka inuu ka tago Borussia-Park inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.